Iko GNU / Linux inoshanda zvakanyanya kupfuura Windows maererano nekushandisa RAM? | Linux Vakapindwa muropa
Mubvunzo une nharo uyo unomutsa kumwe kushoropodzwa kana kupesana senguva dzose kana tichienzanisa masevhisi akasiyana kana zvigadzirwa. Mune ino kesi, isu tinokumbira kurwa kwekusingaperi zvakare Linux vs. Windows kuenzanisa mashandisiro anoita masystem ese ekurangarira kukuru, ndiko kuti, mabatiro ainoita imwe nendangariro pasina kupinda muhunyanzvi ruzivo
Kana tichitaura nezve main memory tinotaura nezve RAMIsu hatisi kureva chechipiri kana chikuru ndangariro senge dzakaomarara dhiraivha, kana kumhanya mabhaunders senge cache kana buffer, marejista, nezvimwe. Zvakanaka, iyi ndangariro, neMMU yekuvakwa kwemuchina uye nesisitimu yekushandisa, kana kuti zvirinani, iyo kernel, ichaigadzirisa kuitarisira uye kuigovera pakati peanomhanya maitiro aripo.
Mubvunzo watinoisa mumusoro unoreva kuti manejimendi akadaro anoshanda zvakanyanya muWindows kana Linux. Zvakanaka, isu tinongofanirwa kuongorora zviwanikwa zvinodiwa neese masisitimu kuti tione kuti Windows inoda RAM yakawanda kupfuura Linux, isu tinongofanirwa kutarisa pane zvidiki zvinodiwa zveumwe neumwe wavo. Kunyangwe ichokwadi kuti mu GNU / Linux inosiyana zvichienderana nedistroSezvaunoziva, kune mamwe akareruka kupfuura mamwe uye nenzvimbo dzinoshanda zvakanyanya dzedesktop dzinogona kutomhanya pamachina ane mashoma zviwanikwa (senge Raspberry Pi) kana pamakomputa ekare.
Asi kana isu tichienzanisa isina-kurema kugovera, senge Ubuntu, zvine chekuita neyakaenzana muiyo nyika yeMicrosoft, tinoramba tichiona kuti izvo zvinodiwa neBuntu zvakadzikira pane Windows. Semuenzaniso, izvo zvazvino vhezheni zveWindows zvingangoda kusvika ku4GB kuti zvishande nemazvo, nepo Ubuntu yakaringana hafu. Naizvozvo, zvinogona kuve nechokwadi chekuti kushanda kuri nani muLinux, zvichisiya zvimwe zviwanikwa zviripo zvekushandisa kana mitambo yemavhidhiyo ... Ndeipi iri mukana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Iko GNU / Linux inoshanda zvakanyanya kupfuura Windows maererano nekushandisa RAM?
Anodiwa Isaac PE, ndinobvumirana nechinyorwa chako kuti Linux inochengetedza zviwanikwa zvirinani mune zvese, kunyanya RAM. Iye zvino, Windows inowanzo kuve nemaitiro asingaverengeke anomhanya kupfuura Linux. Antivirus, firewall, anti malware, dzakasiyana telemetries uye yakareba etc. Linux haidi maitiro aya, ayo anoshanda mukufarira kwayo. Windows 10, uchitarisa zvambotaurwa, zvakare inochengetedza zviwanikwa zvisina mhosva. Kwaziso.
Chokwadi, asi zvakadaro, ini ndinofunga iyo Linux kernel inobata RAM zvirinani. Uye ini handidi kutaura kuti Windows idambudziko mune iyo pfungwa ... Uye kana iwe uchida, sezvo ini ndisina kuzviita muchinyorwa, ndinogona kupinda mune mamwe maratidziro ehunyanzvi, senge mashandisiro anoita Windows " kuita sezvazvinoitika.iyo nguva yekukwirisa, nepo muLinux, huwandu hweyeuchidzo hunoda kubva pakutanga kwesisitimu kusvikira chinguva X, inoramba yakadaro (tichifunga kuti maitiro akafanana ari kushanda). Handizive kana ndikazvitsanangura ...
Ini ndinongoda kuisa ...
… »Chidzidzo ichi chaitwa kuyunivhesiti ine mukurumbira muUnited States», nemutoo weasina kurongwa, sezvo usinga ratidze zvine chinangwa.
Ichi chii akadaro
Asi kana W10 ichishandawo ne2GB ye RAM! Zvese zviri 32-bit uye 64-bit. Vanowana kupi ivo vari 4GB?
Uyezve, pawebhusaiti yavo yepamutemo vanotaura zvakajeka kuti 2GB ye RAM inodikanwa pamidziyo mitsva, kuti kunyangwe idzo kukwidziridzira kuW10 kubva kushanduro dzapfuura dzinongoda 1GB chete.
Uye kubvira riini data iri rinoreva kuti mumwe anokwanisa kubata ndangariro zvirinani pane imwe? Ndine hurombo, ndatevera peji rino zvakanyanya, asi nhasi ngano yadonha.
Pindura Pano Pano Ichi
Tiri kutaura nezve makumi matanhatu neshanu mumatambudziko ese ari maviri. Uye cherekedza kuti hapana nguva ini yandinotaura nezvekudya 64GB, asi ndizvo zvinodiwa ...
Hezvino izvi izvozvi akadaro
Ehezve, izvo zvinodiwa (Zvirinani pane webhusaiti yako) 2GB uye 1GB kune avo vanovandudza
Pindura Izvi Zviri Kuuya Izvozvi
Asi kana W10 ichishandawo ne2GB ye RAM! Zvese zviri 32-bit uye 64-bit. Uyezve, pawebhusaiti yavo yepamutemo vanotaura zvakajeka kuti 2GB ye RAM inodikanwa pamidziyo mitsva, kuti kunyangwe idzo kukwidziridzira kuW10 kubva kushanduro dzapfuura dzinongoda 1GB chete. Vanowana kupi ivo vari 4GB?
Uye kubvira riini data iri rinoreva kuti mumwe anokwanisa kubata ndangariro zvirinani pane imwe? Ndine hurombo, ndatevera peji rino zvakanyanya, asi nhasi ngano yadonha. Imba yamambo yakadii.
Artai Sculpt akadaro
Kufananidza kurangarira manejimendi eese ari maviri mashandiro akafanana nekufananidza bacon nekumhanyisa. Izvo hazvina musoro nekuti ivo havana kunyangwe akafanana masystem anoshanda: imwe ine monolithic kernel kupesana neimwe ine hybrid kernel.
Unogona kuenzanisa zvakanyanya kuti ndangariro dzinodya zvakadii pakuzorora, asi kunyangwe izvo hazvina musoro, nekuti masystem ese ari maviri anoshandisa memory cache inochengeta muzana yezviyeuchidzo zvepanyama kuti "uende kumberi" kwekuitwa kwemaitiro. Ndosaka uchitsvaga izvozvo Windows 10 inoshandisa 4 Gb ndeYEMAHARA, semuenzaniso.
Pindura kuna Artai Esculta
Ehezve ivo havana chekuita nazvo, asi izvo hazvireve kuti ivo havagone kutengwa ... Unogona kutenga mota dzine Diesel kutenderera enjini nevamwe vane maOtto cycles uye hapana chinoitika ... Kana iwe ukasimudza, iwe waigona kungoenzanisa Linux newe ...
Artai Esculta Fernandez akadaro
Ndozvazviri, haugone kuenzanisa chimwe chinhu chakanyatsosiyana, icho chisina kuvakirwa pamisimboti imwechete uye isingashande zvakafanana.
Unogona kuramba uchiedza kuenzanisa mamakuchu nemasponi kana iwe uchiri kufunga kuti anobatsira, asi zvirinani zviite nerumwe rudzi rwechinangwa uye kwete chete nekuda kwayo.
Kana iwe uchida muenzaniso wekuenzanisa, zviite nemaPOSIX masystem: BSD vs GNU / Linux
Pindura kuna Artai Esculta Fernández
Chii chinouya icho akadaro
Asi kana W10 ichishandawo ne2GB ye RAM! Vaviri vari mu32bit uye 64bit. Zvakare, pawebhusaiti yavo yepamutemo vanonyatsoratidza kuti 2GB inodikanwa pamidziyo mitsva, yekuti kunyangwe avo vanokwidziridza kuenda kuW10 kubva kumashanduro apfuura vachangoda 1GB chete. Vanowana kupi ivo vari 4GB?
Mhoroi, ndataura nezvevazvino vhezheni yeWindows. Ichokwadi kuti kune Windows 10 chete 2GB inodiwa kune makumi matanhatu neshanu, nekuti vakaigonesa zvakanyanya kufunga nezve nharembozha ... Asi mushanduro dzakapfuura zvakange zvisina kudaro.
Wakarurama mupfungwa iyoyo. Inofanirwa kunge yakatsanangurwa. Zvichida iyo logo iri mumufananidzo inokurudzirawo nyonganiso. Asi kana tikapinda muhunyanzvi dhata, Linux inoshanda zvakanyanya kugadzirisa RAM, zvisinei nekuti inoda 2Gb, 1 kana 512MB ... Kana kunyangwe zvishoma mune light distros.
Ini ndinoda Mint, ini handizive kuti sei asi palaptop yangu ndiyo inonyatso kubata RAM yevatatu (Ubuntu, W10 neMint). Nekuvhura iwo iwo mapurogiramu, vese vatatu vakadya zvishoma paMint, nekure. Iwo aive "standard" shanduro zvekutaura, Cinnamon, Unity uye Windows. Ubuntu yaive "yakaipisisa" yevatatu, isina kuve akaipa, hongu. Asi iwo aive akareruka bvunzo, ini handina kumboita yakadzama ongororo yenyaya iyi.
Iyo inofananidzwa chose, hazvina basa kana ivo vakasiyana, chinoyerwa ndiko kushandiswa kwe RAM,
Ndine urombo kuti meseji yakatumirwa kakawanda. Ndakashaya kuti vanga vatumwa here
Hapana, usazvidya mwoyo…
Ini ndinobvumirana zvachose nechinyorwa chako. Zvakaoma kuenzanisa masystem ese ari maviri, nekuti Windows inoda zvimwe zvekushandisa kuti zvishande zvakanaka, asi kutaura chokwadi, kana zvichivada ipapo zvakanaka kuva nazvo zvekuenzanisa, ini ndinoisa nyaya yeantivirus, muLinux unogona kushanda pasina iyo pasina matambudziko, muWindows zvingave zvisina musoro kuti utange kushanda nayo pasina kumisikidza imwe.
Kunongedzera kuchikamu inyaya yemamwe ma distros, Ubuntu semuenzaniso, mune gore kana zvakadaro, inoshandisa yakawanda RAM kupfuura zvakajairwa, ndinofungidzira kuti ichave nekuda kwechimwe chisina kugadziriswa bug, asi kunyangwe zvakadaro inoshandisa shoma RAM.
Sezvawataura izvi ndezve nezve RAM chete, asi ini handigone kubatsira asi zvakare kufunga nezvekushandisa dhisiki, iwe unongofanirwa kuona kuti chii kana chimwe chinogara mushure mekumisikidzwa, uye izvi hazvireve kuti mazhinji Linux distros atokupa iyo iyo mazhinji emapurogiramu auri kuzoshandisa gare gare.
Zviripachena, Windows inoda yakawanda RAM kupfuura Linux. Pamakomputa akafanana, kunwa kuri pasi mushanduro dze linux dzakaenzana nema windows. Ndokunge, kubuntu, mint mate inoshandisa zvakanyanya kushoma pane windows 10, ese ari achangobva kuiswa. Ngatisarambe tichienzanisa mwedzi gare gare.
Kana isu tichiita kuenzanisa ne xfce kana lxde vhezheni pamusoro windows, iko kunwa kuri kwakadzika zvakanyanya nekuda kwenzvimbo dzayo yakajeka. Ubuntu chakasarudzika munyika ye linux. Uye zvakadaro zvinoshandisa zvishoma pane W10.
Iyo firewall haina kudya zvakanyanya, uye isina huremu antivirus senge yekuchengetedza yakakosha haina kana. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kudziisa pane linux. Asi software yese yeplatform ino ine zvishoma zvishoma zvinodiwa pane windows. Ndokusaka uchigona "kumutsidzira" makomputa ekare ne linux.
Zvakanaka baba vangu vane Windows 10 AMD64 ine 2Gb ye RAM mune AMD Athon X2 @ 2.9 Ghz uye chokwadi chiri… kuti 1,5 Gb ye RAM inodyiwa kubva pakutanga (iyo chete isiri-default sevhisi yeAVG Antivirus) uye iye anoita sei slug, inononoka sechinhu chisina basa. Kudya 1,5 Gb ye RAM nekukurumidza apo OS painotanga iri ZVINOKOSHA INEFFICIENT.
Iyo sisitimu haina kana makore manomwe ekuberekwa, uye pakuenzanisa, yangu Gentoo OS ingangoita makore maviri ekuberekwa uye kubva pakutanga ichiri kushandisa zvakafanana, 7 mb ye RAM neese masevhisi ari pamusoro (AppArmor, Samba, sensors, smartd, hdparm, firewall, ntpd, dns cache). Muchokwadi, izvozvi sisitimu yangu inoshandisa 180 Gb ye RAM, iine masevhisi ese, Firefox ine 1.5 yakavhurika tabo uye SpaceFM, ngatitaurei nezve RAM manejimendi mashandiro uye Linux iri kukunda nekukoromoka, uye kuti ini ndinoshandisa GTK27 yavanoti inodya zvakawandisa RAM.
Pasina kuverenga, chokwadika, nekwanisi yekugadzirisa iyo Linux inofanirwa kubata RAM nekugadzirisa maitiro ayo nenzira yegirinamu muVM yayo, chimwe chinhu icho Windows isina kana muzviroto. Pasina kutaura nezve kugona kugovera SLAB / SLUB ndangariro yeLinux kernel uye misiyano yayo yakatarwa uye zvakanakira zvichienzaniswa neSLAB modhi inoshandiswa neWindows.
Panyaya yekushandisa zviwanikwa Windows, zviri pachena kusaririra kumashure, pachokwadi vanozvigamuchira ivo pachavo, vanoziva akawanda ematambudziko avo uye ivo vanoziva kuti vanofanirwa kuzvigadzirisa, asi ivo havasi ivo vekutanga kukambani, sezvazvakange zvisiri kukosha kwekambani kugadzirisa dambudziko.chinyakare svchosts.exe bug iyo kana uchigadzirisa Windows XP, Vista uye 7, inogona kudya yako yese RAM ndangariro kungotarisa iyo system uye kutsvaga zvekuvandudzwa.
Zvisinei, iwe unogona kutaura zvine hunyanzvi pamusoro penyaya iyi, uye kumagumo tichazoziva kuti ndiani achakunda mumakwikwi.
Ndanga ndichishandisa Linux senzira huru yekushandisa mumacomputer angu ese kweanopfuura makore gumi nemashanu uye zvirokwazvo, kushandiswa kwezviwanikwa mune zvese (kwete RAM chete) zvakaderera muLinux. Hazvina musoro kuti hapana anoedza kuratidza zvimwe. Izvo zvaizove zvisina kuvimbika.
Asi kupedzisa kuti Linux inoshandisa yakaderera RAM pane Windows nekuti zvayinoda zvishoma yakaderera, inoratidza kushomeka kushoma kune iro chikamu chemunyori wechinyorwa uye kushomeka kwezve zviwanikwa.
Izvi zvinyorwa zvinoita GNU / Linux kusabatika uye huwandu hwekuti "Linux iri nani nekuti, nguva." Linux iri nani, hongu. Avo vedu vanoziva ese maviri masisitimu anonyatso kuziva pasina kupokana. Asi inofanirwa kuratidzwa nenharo dzakasimba, kuti pane uye zvakawanda.
Izvo zvinondipa kumiswa kwekuti vazhinji vanotaura chete kuti vaunze mhirizhonga, kunyanya iya iya yakati anoshanda masisitimu haagoni kuenzaniswa nekuda kwemusiyano mukuvakwa kweiyo kernel (WTF?). Chekutanga pane zvese, 99% yemakomputa akavakirwa paVon Neumann maumbirwo umo ndangariro iri pachena chikamu chechipiri chakakosha, saka kutaura kuti haikwanise kuenzaniswa inyengeri zvakanyanya, kuumbwa kwembere hakuna chekuita it either., Dragonfly uye Darwing zvakare mahybrids uye ane memory memory yakafanana neLinux ...
Mubvunzo uri nyore, ini ndakafambisa michina ine mwero 2GB kana kusvika ku4GB yegondohwe kuLinux (uye kune vanhuwo zvavo ini ndinowanzo kurudzira kubuntu, kuti KDE haina kana chiedza pakati peizvo zviripo) uye musiyano wekuita unosekesa unoonekwa mu unofarira Linux. Kutaura kuti Windows inofanirwa kumhanyisa mamwe masevhisi hafu yekushaikwa kwezivo, muchokwadi Linux inomhanya sevhisi yakatsaurirwa yega yega maficha ayo, uye kunyangwe isinga mhanye iyo "LinuxDefender", kana ichimhanya iptables, SELinux nekumwe kudzivirirwa mitemo, inoitwa padanho rekernel.
Pasina kutaura nzvimbo dzevashandisi uye dzimwe idzo dzinofanira kumhanyiswa neLinux, zvirokwazvo ndinokukoka kuti uongorore ndangariro yako muLinux, uye iwe uchaona kuti 90% yeyeuchidzo inoshandiswa iri munzvimbo yemushandisi (zvishandiso, graphical nharaunda, nezvimwewo) kupfuura muhurongwa hwekushandisa….
Izvo zvinongoramba zvichingoisa kuisa distro (sekubuntu), uye windows, isina zvimwe zvirongwa kupfuura izvo zvinobva kufekitori uye nekuona kudyiwa kwegondohwe rega rega, tisingatauri kuti kugoverwa senge xubuntu kunouya nezvizere zvikumbiro zvekushandisa nezvose chaizvo; browser, tsamba, odhiyo / vhidhiyo vatambi, nezvimwe. Nepo windows… zvakanaka….
Pindura kuna Exos
Ndine urombo neni, yanga isiri imba yamambo. Ini ndakatevera peji rino zvakanyanya uye ini ndicharamba ndichiitevera pakati pezvimwe zvinhu nekuti ini ndinoda Linux zvisingaite kupfuura Windows uye zvinogara zvakanaka kwandiri kuti ndizive nhau. Maonero maonero, anoremekedzwa chaizvo. Asi ipapo pane rusununguko rwemunhu wese uyezve kune uyo anoripiwa naMwari, Musande Peter anogona kuriropafadza.
Uri kuedza zvakanyanya kundiita kuti ndione kuti Linux inomhanya yakawanda maitiro kupfuura Windows? xDDD. Ini handifunge kuti chero munhu pano anokahadzika kuti Linux inokurumidza kupfuura Windows, nekuti zvingave zvakapusa kana kuenzanisa izvo. Asi izvi hazvifananidzwe pano, izvo zvatiri kuyedza kuenzanisa ndangariro manejimendi. Iri Linux inokurumidza kubata iyo yakafanana nhamba yeZVINODA ZVIMWE maitiro seWindows? Ndiwo mubvunzo. Ini handizive, uye ndinofungidzira kuti mhinduro ndeyokuti, asi pano tiri kuenzanisa kana Linux yakareruka kupfuura Windows, kwete kuti Linux inobata ndangariro zvirinani pane Windows. Ini ndinofunga Linux ine chiuru chakanaka zvinhu chekuita nezvisina maturo zvinyorwa.
Ini ndinofunga wakanganisa izwi rekuti kushanda.
Chinhu chakakosha ndechekuti muLinux unogona kuona zvinonyadzisira zvakafanana kana nekukurumidza kupfuura munguva yechando
Zvakanaka, mune yangu chinhu chandakavimbisa kakawanda kunyanya nekuuya kweWindows 10. Kune michina mitsva ine core i5 uye Windows 10 inoita kuti vanzwe vachinonoka zvakanyanya. Uye zvakawandisa windows muchina munguva pfupi yapfuura inoshandisa chiwedzero chekurangarira, iine 8 gb yegondohwe rinogarwa rinenge mashanu kana matanhatu gb. MuLinux chokwadi ndechekuti inoshanda zvakanyanya, zvekuti mumachini kubva makore mazhinji apfuura, senge imwechete-musimboti processor yandakaita basa nemazvo, uye ivo vanoto shandira yekugadzirisa mifananidzo ne gimp nezvese, kwete nekukurumidza hongu, asi izvo hazvingafungiki nema windows.
Chiremba anokurudzira kuita zvishoma pakudya kwemangwanani. Izvo hazviitire iyo Linux zvisikwa chero zvakanaka kuburitsa iyi mhando ye "nhau".
Zvakanaka, ndichiona zvandakaona, ndinoreva bvunzo dzinoshanda dzandakaita pamakomputa mazhinji etsanangudzo dzakasiyana, uye ndinogona kutaura kuti Linux inonyatso kubata gondohwe uye kunyanya zviwanikwa zviri nani pane Windows. Kwayedzwa paCore Duo makomputa ane 1-2 Gb yeRam, uko Windows inokambaira nekukasira kana iwe ukavhura maviri mafomu, Mageia 5 uye 6 (vhezheni 6 iri kutogadzira) ne KDE desktop (inofanirwa kuve yakanyanya kurema uye rega ini Izvo Ini ndinokahadzika nazvo), inomhanya zvirinani, uye haisiri maonero angu chete, ndeevashandisi vakajairika vanoshandisa sisitimu mazuva ese kushanda avo vanondiudza nezvazvo.
Ini handisi kuzopinda mune zvehunyanzvi pfungwa, nekuti pakupedzisira izvo zvinowanzo fanirwa nevashandisi ndezvekuti michina inoshanda nemazvo uye mushure mechinguva, kunyanya Mageia mune iyi kesi anokunda nekukoromora kwepasi. Ndakaendesa anopfuura makumi maviri emakomputa kubva paWindows kuenda kuMageia uye mushure megore rinenge vachiri kushanda sezuva rekutanga.
Musoro unotaura nezve manejimendi manejimendi, asi muchinyorwa iwe waingotaura nezve ndangariro iyo imwe kana imwe kugovera inogara (zvinhu zvakasiyana). Zvirinani vangadai vakave hunyanzvi pane iyi nyaya, ini ndinogona kuisa arch isina graphical nharaunda uye hapana chinotora chero ram ram ...
Yakanaka murombo chinyorwa.